यि हुन यो वर्षका चर्चित सात तिज गीत(भिडियो सहित) » लोक संगीत पारखी
गीत संगीत अपडेट मनोरन्जन
✍🏻लाेक संगीत पारखी	Posted on १६ भाद्र २०७६, सोमबार २१:२२
खगेन्द्र दाहाल, नेपालगन्ज । हरेक वर्ष सयौ तिजका गितहरु निस्कने गरेका छन । तिज आउनु पुर्व ४५ दिन अघि नै तिजका गितहरु बजारमा कलाकारले ल्याइसकेका थिए । हिजो आज तिजका गित खोज्न पसलमा जान पनि पर्देन । इन्टरनेटको माध्यमबाट तिजका गित युटुवबाट हेर्ने डाउनलोड गर्ने गरेर नाच्ने प्रचलन मौलाइसकेको छ । यसपालि बजारमा आएका हामिले फेला पारेका तिजगितहरुमध्ये युटुवमार्फत धेरै हेरीएका मनपराइएका सात गितबारेमा चर्चा गर्देछौ ।
१. गाउँघरसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगे सगै डेग साउण्ड बजाएर तिजका गितमा रमाउने प्रचलन केहि वर्षयता बढेको छ । मौलिक पाराले गाउँघरमा तिजका भाकामा गाएर दुख सुखको कुरा गर्ने , नाच्ने रमाउने परम्परा हराइसकेको पाइन्छ । अहिले चर्चा हुन्छ त केवल कलाकारले युटुवमार्फत बजारमा ल्याएका गितको । यस वर्ष मिश्रीत गितहरुले युटुवमा दर्शक पाएका छन । जसमध्ये सिन्धु मल्लको चिटिकै भाछुरे बोलको गितले अत्याधिक दर्शक पाएर पहिलो नम्बरमा स्थान बनाएको छ । सिन्धुमल्लको गितलाई ६४ लाख ६९ हजार बढिले युटुवमा हेरीसकेका छन ।
२. हरेक वर्ष तिजमा गित गाउनेहरु भन्दा पनि कहिलै तिजका गित नगाएका कलाकारको गितले पनि चर्चा कमाएको छ । मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाले अलि फरक ढङगले प्रतुति गरेका कारण पनि दर्शकले मनपराइदिएका छन । दुर्गेशले गाएको हामि पनि नाच्नु पर्छ विच्च विचमा बोलको गित सबैको मनमा बस्न सफल बनेको छ । युटुवमा दोश्रो नम्बरमा रहेको गितलाई ६२ लाख ७० हजार बढि दर्शकले हेरेका छन ।
३. तिजमा सधै चर्चाको शिखरमा रहने गायक हुन पशुपति शर्मा । पशुपतिले तिजमा हरेक वर्ष अरु कलाकार भन्दा धेरैनै गित गाउने गर्छन । यसपालि अलि कम गित गाएका पशुपतिको केहि गित चर्चामा छन । जसमध्ये युटुवमा धेरै हेरीएको अष्ट्रेलिया काण्ड शिर्षकको गित तेश्रो नम्बरमा छ । गितमा पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारीको आवाज रहेको छ । यसगितलाई ४५ लाख ९६ हजार बढि पटक दर्शकले हेरीदिएका छन ।
४. हिजो आज कुनै गित डाइलग, अभिनयलाई चर्चामा ल्याउने टिकटक पनि हो । गित गितहरुपनि टिकटकमा खुबै रुचाइएको देखिन्छ । टिकटकमा एक नम्बरमा आएको तिज गित के छ ओए पानपाते ठुलीलाई युटुवका दर्शकले पनि अत्याधिक मनपराएर हेरीदिएका छन । यसगितमा रविन लामिछाने र रिना केसीको स्वर रहेको छ । गितलाई ४३ लाख ४२ हजार बढि दर्शकले हेरेका छन ।
५. धेरै दर्शक पाउने कलाकारहरुको भिडमा पशुपतिका अन्य गित पनि परेका छन । सुहायो चौपट्टै बोलको गित गाउँघर,पार्टिहरु सगै युटुवमा धेरै मनपराइएको गितमा परेको छ । युटुवमा यो रिर्पोट तयार पार्दा सम्म पाँचौ नम्बरमा रहेको गितले ३७ लाख ५६ हजार बढि दर्शक पाएको छ । गितमा पशुपति सगै देवि घर्ति, राजु ढकाल र सुस्मिता घर्तिको सयुक्त आवाज रहेको छ ।
६. गितका गितमा हास्य व्यङय सहितका शव्द रहेको पनि चर्चामा छन । जसमध्ये ठेल न बुढि ठेल बोलको गितले युटुवमा ३४ लाख १० हजार बढि दर्शक पाएको छ । रविन घर्तिमगर, मदन सेन्चुरी र टिका लामिछानेको स्वररहेको गित छैठौ नम्बरमा रहेको छ ।
७. यस वर्ष अध्याधिक मन पराइएको गितहरुको भिडमा नारी बेदनाले भरीएको गायिका शान्तिश्री परियारको फुलमति चनमति गितलाई पनि दर्शकले आफ्नो रोजाईमा पारेका छन । सातौ नम्बरमा रहेको यस गितले २१ लाख ५५ हजार बढि दर्शक पाएको छ । गितमा शान्तिश्री सगै ज्ञानु परियारको आवाज रहेको छ । पहिले गितको मापन रेडियो टेलिभिजन र क्यासेट विक्रिबाट गरिन्थ्यो भने अहिले युटुवको भ्युवरको आधारमा गरीन लागिएको छ । यसमा केहि गितहरुले बास्तविक चर्चा कमाउछन भने केहि गित हल्लाको भरमा चर्चामा रहन्छ जसले बास्तविक तिजगितहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन ।
बिष्णु माझी र ऋषि खड्काको स्वरमा अहिले सम्मकै दर्दनाक भिडियो, कमजोर मनहुनेहरुलाइ नहेरिदीन आग्रह मन स...
प्रदेशी का आखै रसाउनी गीत "आजकल का मुना मदन" -- (भिडियो सहित)
फेरी आयो अर्को खबरदारी गीत “नयाँ पार्टी ” (भिडियो सहित)
गायिका लक्ष्मी मल्लले नाकै छिनाउनी बुलाकी लाएपछि ,श्रिकृष्ण बम मल्ललाई आपत...(भिडियो सहित)
Previous Postधेरै पछि समाजले अशल हिरो पाएको छ – प्रेम बानियाँ
Next Postयसपालि को दशैमा पनी बिष्णु खत्री ले छुट्टी नपाएपछी रन्जिताको भयो यस्तो हालत– भिडियो सहित